Mbupu - Gem Shop
DHL Express bụ naanị ọrụ ka na-arụ ọrụ 100% n'oge nsogbu Covid-19
Koodu: Covidien-19 (Uru: US $ 60.00)
Nyefe DHL Express n'efu maka ụgwọ ọ bụla opekata mpe US $ 100.00
Nyefe na ụbọchị atọ zuru ụwa ọnụ
* Ọ dị ruo 2020 Ọgọst 31
Ihe niile bara nnukwu uru dị ka ‘dị’ dị na ngwaahịa ma dịrị njikere maka mbupụ ngwa ngwa. A na-ahazi iwu n'ime ụbọchị ọrụ 1. Site na Mọnde ruo Fraịde.
Ozi Mgbakwunye N'ọtụtụ mba, mbubata mbubata na ụtụ isi kwụrụ ụgwọ maka mbupụ ụgbọ mmiri. Akwụkwọ edebanye aha na-ewe oge, mana ọ na-ezere ụgwọ ndị ọzọ. Obi dị anyị ụtọ ibute usoro gị dị ka “Onyinye”, mana biko mara na anyị enweghị ikike ịkwụ ụgwọ ụgwọ nke enwere ike ịdị na obodo gị.
Cheta na: Import tax ma ọ bụ ọrụ bụ onye na-azụ si ibu ọrụ. Laghachi butekwara na-jụrụ n'ihi na nke ndị dị otú ebubo-apụghị nabatara. Ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọ bụla ndokwa pụrụ iche.